Raw Oxiracetam ntụ ntụ (62613-82-5) Ndị na-emepụta ya - Phcoker Chemical
Oxiracetam ntụ ntụ (62613-82-5)
A na-amụ Raw Oxiracetam ntụ ntụ ka ọ bụrụ ọgwụgwọ maka ncheta ncheta metụtara ọrịa Alzheimer na ọrịa ndị ọzọ other.
Oxiracetam ntụ ntụ (62613-82-5) video
Oxiracetam uzuzu (62613-82-5) Smmezi
Product Name Raw Oxiracetam ntụ ntụ
Chemical Aha 2- (4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide
ika aha Enweghị data dị
Klaasị ọgwụ ọjọọ Nootropics ọgwụ ọjọọ
molekụla Fnhazi C6H10N2O3
molekụla Wasatọ 158.15
Nkịtị Monoisotopic 158.069 g / mol
Mgbu Point 165-168 ° C
Esi mmiri 494.6 Celsius C na 760 mmHg
Ọkara Ndụ nke Ndụ 8 awa
Agba White Solid
Sịkwa akwa Tigwe Akọrọ, ọchịchịrị na 0 - 4 C maka obere oge (ụbọchị ruo izu) ma ọ bụ -20 C maka ogologo oge (ọnwa ruo afọ).
Antinye Nootropic. Analog nke Piracetam na ọrụ psychostimulant.
Oxiracetam uzuzu (62613-82-5) Nkọwa
Osii Oxiracetam bụ ihe na-emepụta ihe na-eme ka ọkpụkpụ nke na-eme ka ụbụrụ na-emegharị, na-akwalite ụbụrụ ụbụrụ, na-ebuli elu ma na-akwalite nlekota ebe nchekwa, ma na-eme ka ncheta uche na mmetụ uche kwụsị. A na-eji ya agwọ ọrịa ụbụrụ psychiatric na nsogbu uche. Ọ nwere ike melite ncheta na ịmụta ikike nke ndị ọrịa nwere nkwarụ ma ọ bụ nsogbu nchekwa. Ọ bara uru maka ịgwọ ọrịa na-adịghị na ntanetị, nchekasị ncheta na nsogbu ọgụgụ isi kpatara ụbụrụ ụbụrụ. A pụkwara iji ya mee ihe maka ọgwụgwọ agwọ ọrịa maka ọrịa neurosis, ụbụrụ ụbụrụ, ụbụrụ, na ọrịa ụbụrụ ndị ọzọ. Raw Oxiracetam ntụ ntụ kachasị mma bụ na ọ bụ mmiri na-edozi ya, na-eme ka ọ dị mma maka ogwu. Nnyocha na-egosi na Raw Oxiracetam ntụ ntụ nwere elu pharmacological ọrụ na ịrịba curative mmetụta tụnyere Piracetam.
Oxiracetam ntụ ntụ (62613-82-5) Ime ihe
Oxiracetam ejiriwo nke ọma chebe onwe ya pụọ ​​na ndị na-ahụ maka ụbụrụ na scopolamine ma na ọnụ ọgụgụ mmadụ na oke ụmụ mmadụ, na-atụ aro na ọ nwere ike inye aka mgbake site na ịṅụbiga mmanya ókè na ihe ndị ọzọ na-adịghị mma nke na-echekwa echiche site n'ichebe acetylcholine dị oke dị ka usoro isi.
E gosipụtara Oxiracetam iji mee ka acetylcholine hapụ n'ime sel hippocampal. Dika acetycholine ji tinye aka na nlekota nchekwa, nke a nwere ike iburu ihe ojoo ya.
uru of Oxiracetam ntụ ntụ (62613-82-5)
Nchekwa na iche
Mgbanwe Ọganihu Dị Mma
Ịdị nwayọọ na-agba ume ma na-akwalite ime ihe
-atụ aro Oxiracetam ntụ ntụ (62613-82-5) Ọgwụgwọ
Ụdị oxiracetam bụ ihe na-erughị nke piracetam, ma nke ahụ apụtaghị na obere ego ga-ezu. Otu usoro ọgwụgwọ dị iche dị n'agbata nke 1200 mg na 2400 mg weere ụbọchị, ma na abụọ ma ọ bụ atọ na-agbasa oge dosing (dịka atọ doses nke 400mg ma ọ bụ 800mg).
mmetụta of Oxiracetam ntụ ntụ (62613-82-5)
Oxiracetam nwere ike ime ka isi ọwụwa. Iji kpochapụ isi ọwụwa oxiracetam, wepụta ihe dị ka alpha GPC ma ọ bụ citicoline.
N'ihi na o nwere mmetụta dị nro na-akpali akpali, oxiracetam nwere ike igbochi usoro mgbagwoju anya nkịtị ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị n'ụbọchị.
Ihe na-akpata mmetụta ehighị ụra na nervousness, ọ bụ ezie na ọ dị obere, na-ekwukarị mgbe ụfọdụ. A pụrụ izere mmetụta ndị a site na iji oxiracetam na mbụ ma ọ bụ ibelata usoro onunu.